ကလေးငယ်တွေအတွက် ဘယ်လိုအဝတ်အစားမျိုးတွေကို ရွေးချယ်ဝယ်ယူသင့်လဲ ??? - Chit MayMay
Home Child Fashion ကလေးငယ်တွေအတွက် ဘယ်လိုအဝတ်အစားမျိုးတွေကို ရွေးချယ်ဝယ်ယူသင့်လဲ ???
ဖေဖေမေမေတို့အနေနဲ့ ကိုယ့်ရဲ့သားသားမီးမီးတို့ကို အာဟာရပြည့်ဝအောင် ဘယ်လိုမျိုးကျွေးမွေးစောင့်ရှောက်ရမလဲဆိုတာအပြင် အဝတ်အစားဆင်ယင်ပေးတဲ့နေရာမှာလည်း သားသားမီးမီးတို့နဲ့ ကိုက်ညီမယ့် လိုက်ဖက်မယ့် အဝတ်အစား လှလှပပလေးတွေကို ရွေးချယ်ဆင်ယင်ပေးရပါသေးတယ်။ အဲ့ဒါကြောင့် ဒီနေ့မှာတော့ သားသားမီးမီးတို့နဲ့ ကိုက်ညီမယ့် အဝတ်အစားတွေကို ဘယ်လိုမျိုးရွေးချယ်ပေးရမလဲဆိုတာကို မေမေတို့အတွက်သာမက ဖေဖေတို့ပါ သိထားရအောင် ဖော်ပြပေးလိုက်ရပါတယ်။
၁။ ပေါ့ပါးတဲ့ချည်မျှင်နဲ့ချုပ်လုပ်ထားတဲ့ အဝတ်အစားများကို ဦးစားပေးဝတ်ဆင်ပေးပါ။
ပေ့ါပါးတဲ့ချည်မျှင်တွေနဲ့ ချုပ်ထားတဲ့ အင်္ကျီဘောင်းဘီတို့က သားသားမီးမီးတို့အတွက် ဝတ်ဆင်ရာမှာ လွတ်လွတ်လပ်လပ် ပေါ့ပေါ့ပါးပါးရှိစေတဲ့အပြင် ဘီဒိုထဲ သိမ်းဆည်းတဲ့နေရာမှာလည်း အဆင်ပြေလွယ်ကူစေပြီး တစ်နေရာကနေ တစ်နေရာကို သွားတဲ့အခါမှာလည်း ပေါ့ပေါ့ပါးပါးနဲ့ သယ်ဆောင်ရလွယ်ကူစေမှာပါ။ ချမ်းအေးတဲ့ရာသီဥတုတွေမှာတော့ အနွေးဓာတ်ရရှိဖို့အတွက် ထူထူထဲထဲရှိတဲ့ ဖလံထည်၊ အနွေးထည်တို့ကို ဝတ်ဆင်ပေးသင့်ပါတယ်။
၂။ သင့်တော်တဲ့အဝတ်အစားတွေကို ရွေးချယ်ဝယ်ယူပေးပါ။
အရွယ်ရောက်လာတာနဲ့အမျှ သားသားမီးမီးတို့အတွက် အဝတ်အစားတွေက ရွေးချယ်စရာပိုမိုများပြားလာခဲ့ပြီး အချို့ကလည်း သားသားမီးမီးတို့ကို ဆွဲဆောင်ဖို့အတွက် ကလေးငယ်တွေကြိုက်နှစ်သက်မယ့် ဇာတ်ကောင်တွေကို အခြေခံထုတ်လုပ်ထားတဲ့ အဝတ်အစားတွေကို ဦးတည်ထုတ်လုပ်လာခဲ့ကြပါတယ်။ ဒီလိုအနေအထားမျိုးမှာ သားသားမီးမီးတို့အတွက် ချွတ်ရဝတ်ရ လွယ်ကူတဲ့အဝတ်အစားမျိုး၊ ခန္ဓာကိုယ်အရွယ်အစားနဲ့ လိုက်ဖက်မယ့် အဝတ်အစားမျိုးတွေကို ဖေဖေမေမေတို့က သေချာရွေးချယ်ပေးဖို့ တာဝန်ပိုကြီးလာခဲ့ပါပြီ။
ငယ်ရွယ်တဲ့အချိန်မှာ အဆော့မက်တဲ့ သားသားမီးမီးတို့အတွက် နေရထိုင်ရပေါ့ပေါ့ပါးပါးရှိစေမယ့် အဝတ်အစားမျိုးကို ရွေးချယ်ဝယ်ယူပေးသင့်ပါတယ်။ အဲ့ဒါမှလည်း သားသားမီးမီးတို့အနေနဲ့ ကောင်းကောင်းလှုပ်ရှားသွားလာနိုင်ပြီး ဆော့ကစားနိုင်မှာဖြစ်တာကြောင့် ဖေဖေမေမေတို့ ရွေးချယ်ပေးလိုက်တဲ့ အဝတ်အစားက သက်သောင့်သက်သာရှိနေဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။
၄။ လျှော်ဖွပ်ရလွယ်ကူတဲ့ အဝတ်အစားမျိုးဖြစ်ပါစေ။
သားသားမီးမီးတို့ရဲ့ အဝတ်အစားတွေက လက်နဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ စက်နဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ် လျှော်ဖွပ်ရအဆင်ပြေဖို့ လိုအပ်ပြီး ဒီလိုမှမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့ အချိန်ကုန်လူပန်းဖြစ်ရပါလိမ့်မယ်။ ဗာဟီရများတဲ့အရွယ်မျိုးတွေမှာဆိုရင် မေမေတို့က သူတို့ရဲ့ အခြားသော ဝေယျာဝစ္စအလုပ်တွေကိုပါ လုပ်နေရတာကြောင့် တတ်နိုင်သလောက် ကိုယ့်အတွက်ရော သားသားမီးမီးတို့အတွက်ပါ အဆင်ပြေစေမယ့် အဝတ်အစားတွေကို ရွေးချယ်ဝယ်ယူသင့်ပါတယ်။
၅။ စျေးချထားတဲ့အဝတ်အစားကိုလည်း ဝယ်ပါ။ တန်ဖိုးကြီးအဝတ်အစားတွေကိုလည်း ဆင်ပေးပါ။
သားသားမီးမီးတို့ဝတ်ဆင်တဲ့ အဝတ်အစားတွေကို မကြာခဏလျှော့စျေးနဲ့ ရောင်းချတတ်ကြပြီး အဲ့ဒီအချိန်မှာလည်း မဖြစ်မနေ ဝယ်ယူထားသင့်သလို ကိုယ့်ရဲ့သားသားမီးမီးတို့က အချိန်တိုတိုနဲ့ ကြီးထွားလာတတ်တာကြောင့် အဲ့ဒီအချိန်မှာဝတ်ဆင်ဖို့အတွက်ကိုပါ တန်ဖိုးကြီးမားတဲ့ အဝတ်အစားအချို့ကို ပြင်ဆင်ထားသင့်ပါတယ်။ သားသားမီးမီးတို့အတွက် အကောင်းဆုံးတွေချည်း လုပ်ပေးချင်တဲ့ ဖေဖေမေမေတို့ရဲ့ စေတနာကို နားလည်ပေမယ့် အမြဲတမ်း တန်ဖိုးကြီးအဝတ်အစားတွေချည်းပဲ မဝယ်ပေးသင့်သလို အမြဲတမ်းလည်း စျေးပေါတဲ့ အဝတ်အစားတွေကို မဝယ်ပေးသင့်ဘူးလို့ ဖေဖေမေမေတို့ အားလုံးကို အကြံပေးလိုက်ရပါတယ်နော်။
Previous articleလက်ဖက်ရည်သောက်သုံးခြင်းက ကလေးငယ်တွေအတွက် အန္တရာယ်ကင်းသလား?
Next articleကလေးတွေဟာ ညအိပ်ခါနီးမှာ ဘာကြောင့် ရေတောင်းတတ်ကြတာလဲ